TRUESTORY: KIA ၏ အဆင်အခြင်မဲ့ လုပ်ရပ်များအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူသင့်ပြီလော
KIA ၏ အဆင်အခြင်မဲ့ လုပ်ရပ်များအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူသင့်ပြီလော
ကျဆုံးသူ အရာရှိအမည် ။
ဗိုလ်ဇော်မျိုးထက် ( DSA 52)
တပ်အမည် ။ ။ ခလရ ၁၃၇ ( မချမ်းဘော )
ခြုံခိုတိုက်ခံရသည့် ရက်စွဲ ။ ၂၈ . ၈ .၂၀၁၃
အလောင်း ရှာတွေ့ သည့် စစ်ကူတပ် ။ ခလရ ၁၃၈ ( မူလာရှီးဒီ )
ခြုံခို တိုက်ခံရသည့် နေရာ ။ အင်ဂျန်ဘောက် ၊ မချမ်းဘော မြို့ အနီး ။
ပူတာအိုခရိုင် ။ကောင်လေးက လူတော်လေးပါ၊ သူ့အဖေက ယာဉ်မောင်းပါ၊
ကြိုးစားပြီး အရာရှိ ဖြစ်လာတာပါ၊
သူ့ညီမလေးက လည်းဒီနှစ် (၁၀)တန်းအောင်ပြီး ဆေးကျောင်း တက်နေပါတယ်၊ အရမ်း ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်.. - လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းများနှင့် စစ်သားများအတွက်မပါ.. - တပ်မတော်သားများ ရက်စက်စွာ အသတ်ခံရသော်လည်း ပြည်တွင်းစစ်ချက်ချင်းရပ်ဆို သူများ မည်သော အခါမျှ ဆန္ဒမပြကြ...(ဘယ်ပြမလဲ ဟိုကို ဆန္ဒပြတော့ ဘယ်သူက၊ ဘယ်ကွန်ယက်က၊ ဘယ် NGOက ထောက်ပံ့မလဲ၊ဘယ်ကအညတရသူရဲကောင်းဆုဘာညာသာရကာတွေ ပေးမလဲ.....) - အစိုးရလူကြီးမင်းများ အနည်းငယ်မှားလျှင် (သို့) မှားသည်ဟု မီဒီယာမှနားစွန်နားဖျားကြားရ လျှင်ပင် ပက်ကနဲ ထေ့၊ ရိ၊ သရော်လေ့ရှိသော ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်သည့် အတိုက် အခံဝါဒီများ စစ်သားများအသက်ဆုံးရှုံးတိုင်း နှာစေးလျက်ရှိ(ဘယ်သူတွေမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ထားလည်း တွေးကြည့်..) - ပန်းရဲ့လမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင်းဆီ ဘာညာသာရကာများ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်လျက်ရှိ...
(အင်း.. တပ်က အလှူငွေမှ မထည့်ပဲပဲ..ပဲ..)ခုလောလောဆယ် ဒီစာကို စိတ်တို လို့ရေးတယ်.။
ကျွန်တော် ဒေါ်စုမွေးနေ့က ဆုတောင်းပေးဖူးတယ်၊အတိုက်အခံထဲက သဘောကျတဲ့သူကို သဘော ကျတယ်လို့ ပြောဖူးတယ်.၊ယုတ်စွအဆုံး ဘယ်ပါတီက ဘယ်အချက်တွေကောင်းတယ်၊ဘယ်အ ချက်တွေ လိုတယ်လို့ အပြုသဘောနဲ့တောင် ရေးဖူးတယ်.။ (နာမည်တပ်မပြောတော့ ..) ..။ ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ Brain wash လုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဆို စစ်သားတစ်ယောက်တောင်အဲဒီလို ဆန့် ကျင်ဖက်က လူတော်တွေ၊ လူကောင်းတွေကို ချီးကျူးဖို့သတ္တိမွေးနိုင်ရင်. ခင်ဗျားတို့တွေက ဘာစားပြီးကြီးလို့ ရှေ့တန်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ စစ်သည်တော်ကို မျက်နှာလွှဲနိုင်ကြတာလဲ....။
ဘာကြောင့်မို့ သေပြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင် ပုတ်ခတ်နိုင်ကြသေးတာလဲ..။စဉ်းစားဦး.။ ဘယ်သူက Brain wash လုပ်ခံထားရသလဲ???
ပူတာအို ခရိုင်အတွင်း ဖြစ်ပွားသော....ခြုံခို တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင်.....ဖမ်းဆီးရမိသော စစ်သုံ့ ပန်း အရာရှိအား ....ကျန် သုံ့ ပန်း စစ်သည်များရှေ့ တွင် ...ခေါင်းဖြတ် ဗိုက်ခွဲကာ ....ဗိုက်ထဲသို့ ခေါင်းကို ထည့်ပြခဲ့ပြီး.....သုံ့ ပန်းစစ်သည်အချို့ အားလည်း...သွေးအေးအေးဖြင့်ရက်စက်စွာပစ်သတ်ခဲ့သော.... ကေအိုင်အေ အဖွဲ့ အား....အပြင်းအထန် ရှုံချပါသည်.....
တာဝန်ရှိသူများအား....စစ်စည်းကမ်းအရ ပြင်းထန်စွာအရေးယူပေးရန်...လေးနက်စွာ တောင်းဆိုပါသည်....
ရက်စက်စွာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရပြီး ကျဆုံးသွားသော....အပတ်စဉ် ၅၂ မှ ညီလေးဗိုလ်ဇော်မျိုးထက် ....ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ...